CHINAPLAS2019 Yakanakisa Midziyo- PLA / PET Yemukati Kavara Sheet Extrusion Line - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
CHINAPLAS2019 Yakanakisa Midziyo- PLA / PET Yemukati Yekupakata Sheet Extrusion Line
Pla / PET Yemukati Packaging Sheet Extrusion Line
Polylactic acid (PLA) irudzi rutsva rwe bio-based uye inogadziriswazve inogadziriswa zvinhu. PLA inogadzirwa nemidziyo yesitashi inotsanangurwa nemidziyo yemiti inovandudzwa (sechibage, mufarinya, nezvimwewo). Glucose yakawanikwa kubva kune starch nesaccharization, ipapo yakachena kuchena lactic acid yaigadzirwa nekuvirisa glucose uye mamwe maronda, uyezve polylactic acid ine mamwe mamorekuru uremu akagadzirwa nekemikari synthesis. Iine biodegradability yakanaka, inogona kudzikisirwa zvachose nehutachiona mune zvakasikwa pasi pemamiriro ezvinhu mushure mekushandisa, uye pakupedzisira inogadzira kabhoni dhayokisaidhi nemvura, isingasvibise nharaunda. Izvi zvinobatsira kwazvo pakudzivirirwa kwezvakatipoteredza, uye kunozivikanwa sechinhu chakachengetedza nharaunda.
Inogona kushandiswa mukugadzirwa kwePET nePLA machira, kudzikisa kushandiswa kwesimba kwe pre-crystallization kuomesa, uye kujairira kugadzirwa kwechipiri zvigadzirwa. Iine hunhu hwegoho repamusoro, kushomeka kwesimba simba uye kugona kwepurasitiki. Iyo sikuruu chivakwa chivakwa chivakwa chine akawanda musanganiswa, uye ine akasiyana maficha ekushandisa. Izvo hazvina kukodzera chete kugadzirwa kwePET, asi zvakare zvinokodzera PLA zvigadzirisike zvinhu uye starch-yakavakirwa inodzikisira zvinhu.
Pla / PET yekudzivirirwa kwezvakatipoteredza kuputira jira extrusion yekugadzira mutsetse inowanzo kuve yakaumbwa neakapetwa kaviri extruder, mesh chinja, metering pombi, kufa, matatu anotenderera, kutonhora chikomboredzo, traction, ichitenderera zvichingodaro. Rudzi rutsva rwe co-directional kaviri-sided extruder ine hunhu hwesimba simba kudyiwa, yakapusa maitiro uye nyore kugadziriswa kwemidziyo. Yayo yakasarudzika screw musanganiswa dhizaini inoderedza iyo viscosity donhwe rePET resin. Iyo symmetrical yakatetepa-yakakomberedzwa roller inovandudza iko kutonhora kushanda uye kugadzirwa pamwe nehunhu hwemashiti. Iyo yekudyidzana-yezvinhu yekudyisa chishandiso inogona zvine musoro kudzora huwandu hwezvinhu zvitsva, zvishandiswezve zvinhu, masterbatch uye zvichingodaro. Iwo machira akagadzirwa anogona kushandiswa muminda yepurasitiki yekumwa kudhinda uye kurongedza. Iyo yemagetsi sisitimu inotora Nokia subsystem, iyo inozivikanwa nekureruka mashandiro, yakakwira michina uye mutengo kuponesa.
Iyo bhagiri yakagadzirirwa zvakapetwa kaviri vharuvhu yekuona kuburitsa kuzere kwemvura uye gasi.
Iyo extruder yakagadzirirwa nekunyungudika metering pombi ine inogara iine magetsi kuburitsa uye yakavharwa-chiuno otomatiki kutonga kwekumanikidza uye kumhanya.
Muchina wese unotora PLC kutonga kuti uone otomatiki kudzora kweparamende kumisikidza, kushanda kwedata, mhinduro uye mabasa ealam.
Nyowani isiri-kuomesa PET matatu-chiutsi extrusion yekugadzira mutsara (hapana chikonzero chekristallization dehumidification kuomesa system) ndeyemhando yepamusoro PET nePLA sheet unit yakagadzirwa nekambani. Yayo yekugadzira maitiro iri nyore, simba rekushandisa rakaderera, uye mutengo wekugadzira wakadzikira zvakanyanya.
Zvishandiso: Kwakanaka processability, pachena, chipingamupinyi, isina-chepfu, isina kunhuhwirira, isina kusvibiswa, isina nyore kudzokorora uye mamwe maitiro.
Vharuvhu inoumba: kurongedza chikafu, mabhokisi ematoyi, mabhokisi ezvinyorwa, mabhokisi ezvipo, maturusi emaoko uye kurongedza kwehardware.
Chipingamupinyi Shandisa: Magetsi Zvikamu Packaging.
General use: kupeta, jasi kora, zvekushongedza zvinhu, maforodha, gwaro rinovhara.
KUMASHUREZuva rekutanga rakasaina huwandu hwesimba hombe, JWELL ese anoratidza brand kukwidza!
NEXTCHINAPLAS2019 Yakanaka Zvishandiso- Huru Ukobvu HDPE Pipe Extrusion Line